के भविष्यमा मानव अमर होलान् ? « Sansar News
– संकल्प सिंह
१५ पुष २०७८, बिहीबार १३:०४
मृत्यु एक यस्तो वास्तविकता हो, जसले हामीलाई डराउँछ र नयाँ रहस्यको खोजीमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ । तर, आजको आधुनिक विज्ञानले हामीलाई भविष्यमा अमर बनाउन सक्ने दिशामा अघि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै प्रश्न उठ्छन्, आखिर अमरता के हो ? कुनै पनि व्यक्तिको प्राकृतिक मृत्यु नहुने समाजको संरचना कस्तो होला ? त्यो समाजको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो होला ? नाता र सम्बन्ध कुन आधारमा कायम होला ?
पछिल्ला केही वर्षहरूमा विज्ञानको विकासले हाम्रो औसत उमेर धेरै गुणा बढाएको छ । आज, जीवविज्ञान र भौतिकशास्त्रमा भएका खोजहरूको तीव्र गतिमा, त्यो सम्भव छ कि आउने समयमा, वैज्ञानिकहरूले हाम्रो उमेर आजको भन्दा धेरै गुणा बढाउने कुरा पत्ता लगाउनेछन् ।
मोर्गन फ्रीम्यानको लोकप्रीय शो ‘थ्रूद वर्महोल’मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिचियो काकुले थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियम यस ब्रह्माण्डमा सबै कुरामा लागू हुन्छ भनी बताउँछन् । यस नियमअन्तर्गत सबै चीजहरु क्रमशः आदेशअनुसार र आदेश बाहिर सर्दछन् । अर्थात् कुनै समय नयाँ हुन्छन्, बिस्तारै खिया लाग्ने र अन्त्यमा अन्त्य हुन्छन् । हाम्रो मृत्यु पनि यही प्रक्रियाबाट हुन्छ । एक पटक हामी जन्मन्छौं, बिस्तारै हामी जवान हुन्छौं र अन्ततः हामी मर्छौं । यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एन्ट्रोपीको प्रिन्सिपल भनिन्छ ।
एक पटक हामी जन्मन्छौं, बिस्तारै हामी जवान हुन्छौं र अन्ततः हामी मर्छौं । यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एन्ट्रोपीको प्रिन्सिपल भनिन्छ । आज वैज्ञानिकहरूले एन्ट्रोपीभित्र एउटा ठूलो लूपहोल फेला पारेका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार एन्ट्रोपीमा बाहिरबाट त्यस्तो प्रभाव लागू गर्यौं भने त्यसको सहयोगले विकारलाई रोक्न सकिन्छ वा भनौं भने त्यसलाई पुनः व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
आज वैज्ञानिकहरूले एन्ट्रोपीभित्र एउटा ठूलो लूपहोल फेला पारेका छन् । उनका अनुसार कुनै पनि वस्तुको बढ्दो एन्ट्रोपीमा बाहिरबाट त्यस्तो प्रभाव लागू गर्यौं भने त्यसको सहयोगले त्यसको विकारलाई रोक्न सकिन्छ वा भनौं भने त्यसलाई विकारबाट पुनः व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । त्यसोभए हामी अन्त्य हुनबाट केही रोक्न सक्छौं ? यदि हामीले मानिसलाई पनि त्यस्तै गर्यौं भने, हामीले मृत्युलाई पनि धोका दिन सक्छौं । आउनुहोस् जानौं कसरी ?
माइटोकोन्ड्रिया, जसलाई हाम्रो कोशिकाको पावर हाउस भनिन्छ, यो दुईवटा झिल्लीको संरचना हो । यिनीहरुले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने काम गर्छन् । तर, यी माइटोकोन्ड्रिया बलियो हुँदै जाँदा शरीर बढ्दै जान्छ । एक समय आउँछ जब शरीरको यो पावर इन्जिन पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ । हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोशिकामा धेरै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छन् ।
अमर बन्नको लागि, पहिले हामीले माइटोकोन्ड्रियाको एन्ट्रोपी रोक्नु पर्छ । अर्थात्, सेलको पावरहाउसमा जीवनको सास फेर्नुपर्नेछ । यो एकदमै जटिल कार्य हो । तथापी, भविष्य यस्ता धेरै सम्भावनाहरूसँग खडा छ, जसले हामीलाई त्यसो गर्ने आशा दिन्छ ।
हाम्रो विकास जैविकभन्दा प्राविधिक हुनेछ
प्रसिद्ध लेखक म्याक्स ट्यागमार्कले आफ्नो पुस्तक ‘लाइफ ३.०’मा जीवनलाई तीन चरणमा विभाजन गरेका छन् । पहिलोमा ब्याक्टेरियाको जीवन र विकसित जीवहरू राखेका छन् । दोस्रो चरणमा उनले आजका विकसित मानवहरूलाई राखेका छन् । ट्यागमार्क अनुसार हाम्रो जीवनको तेस्रो चरण आउन लागेको छ, त्यो प्राविधिक हुनेछ, जैविक होइन । उनका अनुसार हाम्रो जीवनको अर्को विकासमा हामीले मेसिनलाई पार्टपुर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं ।
संसारभरका धेरै मानिसहरू कृत्रिम मुटु वा पेसमेकर जस्ता यन्त्रहरूको सहायताले जीवित छन् । ब्रेन चिपको अवधारणाले अहिले वास्तविक जीवनमा नयाँ रूप लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्रमशः प्रगति जैविक नभई प्राविधिक हुने प्रसिद्ध लेखक म्याक्स ट्यागमार्ककाे भनाइ छ । हामी भविष्यमा मानवबाट साइबोर्गमा परिवर्तन हुनेछौं ।
जीवनको विकासको यो चरण सुरु भइसकेको छ । संसारभरका धेरै मानिसहरू कृत्रिम मुटु वा पेसमेकर जस्ता यन्त्रहरूको सहायताले जीवित छन् । ब्रेन चिपको अवधारणाले अहिले वास्तविक जीवनमा नयाँ रूप लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्रमशः प्रगति जैविक नभई प्राविधिक हुने उनको भनाइ छ । हामी भविष्यमा मानवबाट साइबोर्गमा परिवर्तन हुनेछौं ।
यस्तो अवस्थामा, हाम्रो शरीरभित्र धेरै न्यानोबटहरू जडान गर्न सकिन्छ, जसले शरीरको बढ्दो एन्ट्रोपीलाई रोक्छ र हामीले आफ्नो उमेर सीमा पहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढाउन सक्छौं । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, आखिर त्यो भविष्य कस्तो होला ? जो यस्ता सम्भावना बोकेर उभिन्छन् ।
सञ्चय कोष जस्ता योजनाहरू अप्रासंगिक हुनेछन्
आखिर जब मानिस अमर हुन्छ उसको अन्त्य कसरी होला ? लामो आयुका कारण मानिस विनाश नभई लामो समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा युवाका लागि नयाँ रोजगारी पाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसका लागि सरकारले अवकाश र रोजगारीमा नयाँ नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसरी ६० वर्ष पुगेपछि कामबाट निवृत्त हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ । बढ्दो जनसंख्या र अर्थतन्त्रको समस्यालाई ध्यानमा राखेर यस्तो नियम पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, जहाँ मानिसले निश्चित उमेरपछि जीवनबाट सन्यास लिनुपर्छ ।
यस युगमा, सञ्चय कोष जस्ता योजनाहरू, जुन विशेष गरी मानवको भविष्य सुरक्षित गर्न डिजाइन गरिएको थियो, तिनीहरू अप्रासंगिक हुनेछन् । ठूलो जनसंख्या भएकोले हामीसँग धेरै आइन्स्टाइन, मोजार्ट, ट्यागोर, बुद्ध र शेक्सपियर हुनेछन्, जसको दर्शन र आविष्कारले विश्वलाई फाइदा पुग्नेछ ।
अन्तरिक्षसम्बन्धी नयाँ आविष्कार गर्नु पर्नेछ
धेरै मानिसहरू हुनु भनेको हामीलाई धेरै स्रोतहरू चाहिनु पनि हो । यस्तो अवस्थामा हामीले अत्याधुनिक साधनहरुको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने धेरै जनसंख्यालाई पृथ्वीमा राख्न सकिँदैन । हामीले हाम्रो सौर्यमण्डलमा ती ग्रहहरू खोज्नुपर्छ जुन आत्मनिर्भर छन् ।
बढ्दो जनसंख्याका फाइदा र बेफाइदा छन् । एकातिर जहाँ ठूलो परिमाणमा उत्पादनका लागि श्रमशक्ति हुन्छ भने अर्कोतर्फ, अत्याधिक जनसंख्याका कारण हाम्रा स्रोतहरू द्रुत गतिमा समाप्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न हामीले अन्तरिक्ष अनुसन्धान र अन्य ग्रहहरूमा आफ्नो उपनिवेश स्थापना गर्नुपर्छ ।े
अमरताको रहस्य खुलिसकेपछि, हामीले हाम्रो सामाजिक आधारहरू पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक हुनेछ । जीवनको लामो आयुको कारण, एक व्यक्तिको लागि सम्पूर्ण जीवन अर्को व्यक्तिसँग बिताउन धेरै गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत परिवार व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्थाले समाजमा जन्म लिनेछ ।
समाजमा नयाँ व्यवस्थाको जन्म हुनेछ
बुढ्यौलीले राजनीतिको क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । नेताहरू धेरै वर्षसम्म एउटै पदमा बस्छन् । नयाँ परिवर्तन समाजमा बिस्तारै लागु हुनेछ । युवा तथा नवप्रवेशीलाई राजनीतिको क्षेत्रमा आउन अलि कठिन हुनेछ । हामी यस्तो समाजमा बाँच्नेछौं जहाँ १० देखि २० पुस्ता सँगै हुनेछन् । यही कारण इतिहास र वर्तमानबीचको द्वन्द्व पनि देखिनेछ । अमर उज्यालाबाट